Guddoomiye Abshir Axmed Oo Shirkadda Spectrum Geo Ku Eedeeyey Marin Habaabin Sharciyeed – Goobjoog News
in Banaadir, Golaha Shacabka, Wararka Dalka, Warbixin Gaar ah
Guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah mudane Abshir Maxamed Axmed ayaa si kulul uga jawaabay hadal ka soo yeeray Shirkadda Spectrum Geo, kadib markii ay boggeeda rasmiga ku baahisay in sharciga Batroolka uu ansixiyey baarlamaanka federaalka ah isla markaana uu saxiixay madaxweynaha JF. Arrintaas waxaa Senator-ka ku tilmaamay marin habaabin sharciyeed.
Haddaba, Halkan Ka Akhriso Qoraalka Guddoomiye Abshir Axmed:
Shirkadda Spectrum Geo waxa ay boggeeda rasmiga ku daabacday 30 May 2019 qormo ka soo horjeeda dastuurka dalka sida aad ka heli karto lifaaqan https://bit.ly/2Wa8HsP. Qormadaas oo ay cinwaan uga dhigtay Baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ansixiyay Sharciga Batroolka (Somalia’s Parliament Approves Petroleum Law Legislation). Qoraalka waxaa kale oo ay ku sheegtay in Hindise Sharciyeedka Batroolka uu sugayo oo kaliya saxiixa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.